ဂျီပီအက်စ်အညွှန်း | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျီပီအက်စ် & ခရီးသွား Apps ကပ » ဂျီပီအက်စ်အညွှန်း
ဂျီပီအက်စ်အညွှန်း APK ကို
ဂျီပီအက်စ်အညွှန်းနှင့်မြေပုံ Google Maps စွမ်းအားဖြင့် Android ဖုန်းများအတွက်ကမ္ဘာ့အများစုမှာ Install လုပ်ရတဲ့အွန်လိုင်းအလှည့်-by-အလှည့်ဂျီပီအက်စ်အညွှန်း application ဖြစ်ပါတယ်။
သွားလာသည့်အခါအင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုအတွက်လိုအပ်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဂျီပီအက်စ်အညွှန်းနှင့်မြေပုံများအားအွန်လိုင်းပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားကြသည်။ မြေပုံနှင့် application updates များကိုအားလုံးတစ်သက်တာအခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လျှောက်လွှာ, မတော်တဆမှုန်းကျင်လမ်းကြောင်းသင်သည်တတ်နိုင် Multi-ရပ်တန့်လမ်းညွန်နှင့်အတူကူညီခြင်းနှင့်ပင်အခြား routing ကိုစွမ်းရည်, ကြံ့ခိုင် bookmarking options များနှင့်နေရာလေးကိုခွဲဝေမှု features တွေရှိပါတယ်။ ဘဝသငျသညျကြာနေရာတိုင်းမှာမြေပုံရှာပုံတော်, သင်သွားကြဖို့လိုအပ်ပါရှိရာအရပ်၌သင်တို့အတွက်အကူအညီရရန်ဒီနေရာကိုဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့သွားလာရင်းမှတိုက်ရိုက်ပြမြေပုံများ, GPS နှင့်တိုက်ရိုက်အသွားအလာမွမ်းမံမှုများအဘို့အ App ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျမြို့အနှံ့တစ်ဦးအမြန်အမှုကို running သို့မဟုတ်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတစ်လမ်းခရီးစဉ်ကိုယူပြီးဖွင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်, မြေပုံရှာပုံတော်သင်စိတ်ဖိစီးမှု-အခမဲ့အညွှန်းများအတွက်လိုအပ်သည့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောလမ်းညွှန်ချက်နှင့်အအသွားအလာအင်ဖိုရှိပါတယ်။
- ဂျီပီအက်စ်တိကျပြတ်သားမှုသင်သည်အလွန်တိကျမှန်ကန် GPS တည်နေရာကိုပေးသည်။
- ငါတို့သည်နောက်ဆုံးပေါ်အသွားအလာဒေတာကိုသုံးနေသည် သိ. စိတ်၏ငြိမ်းချမ်းရေးပါ။ တိုက်ရိုက်အသွားအလာမွမ်းမံမှုများနဲ့ automatic Re-routing ကိုသင်အချိန်ပေါ်ရှိရကူညီပေးပါမည်။
- လျင်မြန်စွာကော်ဖီ, စားသောက်ဆိုင်, သဘာဝဓာတ်ငွေ့, ငါတို့စက်မှုလုပ်ငန်း-ပထမဦးဆုံးအလွှာ bar ကိုပိုမိုကဲ့သို့သင်၏အကြိုက်ဆုံးအမျိုးအစားအတွက်အကျိုးစီးပွားအနီးအနားအချက်များကိုရှာဖွေ!
- အရှိဆုံးထိထိရောက်ရောက်သင့်ရဲ့ဦးတည်ရာကိုရန်သင့်အားရဖို့အထိသုံးကွဲပြားခြားနားသောမောင်းနှင်မှုလမ်းကြောင်းများ (တဲ့အခါမှာရရှိနိုင်) မှကိုရွေးချယ်ပါ။ သငျသညျအမြားဆုံးအကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အကောင့်သို့အသွားအလာ, လမ်းပိတ်ပစ်နှင့်ထို့ထက် ပို. ယူပါလိမ့်မယ်။
- သင့်ဦးခေါင်းကိုငြိမ်ဝပ်စွာနေရန်နေရာတစ်နေရာရှာပါ။ ထိုဒေသတွင် Explore နဲ့လျှောက်လွှာကနေတိုက်ရိုက်အနီးအနားရှိဟိုတယ်ဘွတ်ကင်!
- ကားလူသွားလူ, ထရပ်ကားများအတွက် Modes သာလမ်းကြောင်းပေးခြင်း။
- မြေပုံဦးတည်ချက်, ဒါမှမဟုတ်မြောက်ဘက်ကိုတက်မောင်းအတွက်လှည့်။
Update ကိုစနစ်က GPS စနစ်
4.76 ကို MB